Zazamarolahy - Wikipedia
Ny Zazamarolahy dia sokajin' andriana tamin' ny nanasokajiana azy ireo, ka tamin' ny voalohany, dia ireo taranak' izy efa-dahy, zanaky ny mpanjaka Andriamasinavalona, nanjaka teo Antananarivo sy Imerina Atsimo (Andrianjakanavalomandimby), tao Ambohidrabiby sy Mandiavato (Andrianavalonimerina), Ambohidratrimo sy Marovatana (Andriantomponimerina) ary Ambohimanga sy Avaradrano (Andriatsimitoviaminandriandrazaka) izany.
Novain’ Andrianampoinimerina anefa izany tato aoriana ka nataony toy izao: Ny tera-dRasoherina renibeny ihany no angalana izay hanjaka ka ny tera-behivavy (ny zana-drahavavin-dreniny) dia natao Zanakandriana, ary ny tera-dehilahy sy ny tera-dRangorinimerina natao Zazamarolahy. Ny Zanakandriana dia tsy tafiditra ao amin’ ny sokajin’ ny havan’ andriana satria andriana toy ny andriamanjaka handova fanjakana. Rehefa niova ny andriamanjaka niaviany dia miongana izy ireo ka tsy mitondra intsony ny anarana hoe Zanakandriana. Ny zanak’ izy ireo na ny zafikeliny fahiny dia nantsoina hoe “Izy mirahalahy avy” na “Izy mianadahy avy”.
Tamin' ny andron' Andrianampoinimerina sy ireo mpanjaka nandimby azy dia nampidirina ho isan' ny Zazamarolahy koa ny sasany tamin' ireo andriana tamin' ny foko hafa, toa ny andriana tany Imamo izay nantsoina hoe Marolahin' Imamo sy ny zanaky ny mpanjaka sasany tao Andratsay. Ny Zazamarolahy dia sady azo ampiakarina ho Zanakandriana no azo ampidinina koa ho Andriamasinavalona.
Maro ny Zazamarolahy no natao ho Andriamasinavalona.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Zazamarolahy&oldid=1009580"
Voaova farany tamin'ny 14 Martsa 2021 amin'ny 19:23 ity pejy ity.